ESI TINYE SSD NA LAPTỌỌPỤ - DISK - 2019
Esi tinye SSD na laptọọpụ
Ndewo Ngwa SSD na-aghọwanye ndị na-ewu ewu na ụlọ ahịa nke ụbọchị ọ bụla. N'oge na-adịghị anya, echere m, ha ga-abụ ihe dị mkpa kama ịbụ ihe dị oké ọnụ ahịa (ọ dịkarịa ala ụfọdụ ndị ọrụ na-ewere ya dị ka okomoko).
Ịwụnye SSD na laptọọpụ na-enye ọtụtụ uru: ngwa ngwa na-ejide Windows OS (oge ịgba ọsọ na-ebelata 4-5 ugboro), ndụ batrị ogologo oge, ụgbọala SSD na-eguzogide ọgwụ dị iche iche na mgbagwoju anya, na-apụ apụ (nke ụfọdụ na-eme na ụfọdụ ụdị HDD disks). N'isiokwu a, Achọrọ m ịmepụta nrụnye SSD na laptọọpụ (ọ bụ ebe ọ bụ na ọtụtụ ajụjụ dị na SSD draịva).
Ihe dị mkpa iji malite ọrụ
N'agbanyeghị na ịwụnye diski SSD bụ ọrụ dị mfe nke ọ bụla onye ọrụ ọ bụla nwere ike ijikwa, Achọrọ m ịdọ gị aka ná ntị na ihe niile ị na-eme bụ nsogbu gị na ihe ize ndụ gị. Ọzọkwa, n'ọnọdụ ụfọdụ, ịwụnye ụgbọala dị iche nwere ike ime ka ị ghara ịhapụ ọrụ ịgba ụgwọ!
1. Laptọọpụ na SSD (ndammana).
Fig. 1. Nchịkọta Diski Dị Nlekọta SPCC (120 GB)
2. Onye nkedo na-acha uhie uhie (nke yiri ka nke mbụ, dabere na ịkwado ihe nchekwa nke laptọọpụ gị).
Fig. 2. Onye na-atụgharị ihe na-ada ụda
3. Kaadị plastic (onye ọ bụla ga - eme ya, ọ dị mfe iji wepụ ihe mkpuchi ahụ na - echebe diski na RAM nke laptọọpụ).
4. Obere ụgbọala ma ọ bụ draịvụ mpụga (ọ bụrụ na ị na-ehichapụ HDD na SSD, mgbe ahụ ị nwere ike ịnwe faịlụ na akwụkwọ dị mkpa iji depụta ya na draịvụ ike ochie ahụ.
Ihe ntinye nhọrọ SSD
Ajuju ajuju a na - achota otu esi etinye SSD uzo na laptọọpụ. Dị ka ihe atụ,
- "Otu esi esi tinye diski SSD nke mere na ma diski ochie ahụ na ọrụ ọhụrụ ahụ?";
- "Enwere m ike ịwụnye diski SSD kama CD-ROM?";
- "Ọ bụrụ na m ga-ehichapụ ochie HDD na ngwa SSD ọhụrụ, olee otu m ga-esi nyefe ya faịlụ m?" na ihe ndị ọzọ
Naanị ịchọrọ ịmepụta ọtụtụ ụzọ isi wụnye SSD na laptọọpụ:
1) Naanị wepụ ihe ochie HDD wee tinye ebe ọ bụ SSD ọhụrụ (na laptọọpụ nwere mkpuchi pụrụ iche na-ekpuchi diski na RAM). Iji data gị site na ochie HDD - ịkwesịrị idetuo data niile na mgbasa ozi ndị ọzọ n'ihu, tupu ị dochie diski.
2) Wụnye diski SSD kama ịnwe ngwa ngwa. Iji mee nke a, ị ga-achọ nkwụnye pụrụ iche. Ihe kachasị mkpa n'ozuzu ya bụ: wepu CD-ROM ma tinye nkwụnye a (nke ịtinye ụgbọala SSD n'ọdịnihu). N'asụsụ Bekee, a na-akpọ ya dị ka ndị a: HDD Caddy for Laptop Notebook.
Fig. 3. Universal 12.7mm HDD HDD Caddy maka Laptọọpụ Notebook
Ọ dị mkpa! Ọ bụrụ na ịzụta ihe nkwụnye dị otú a - gee ntị na ọkpụrụkpụ. Eziokwu ahụ bụ na e nwere ụdị nke abụọ dị otú ahụ: 12.7 mm na 9.5 mm. Iji mara kpọmkwem ihe dị gị mkpa, ịnwere ike ime ihe ndị a: gbasoro usoro AIDA (dịka ọmụmaatụ), chọpụta ihe nlereanya nke onyunyo anya gị wee chọpụta àgwà ya na Intaneti. Tụkwasị na nke a, naanị ị nwere ike iwepụ ụgbọala ma jiri ya na onye na-achị ma ọ bụ mkpanaka ngwangọ ya.
3) Nke a bụ ihe na-abụghị nke abụọ: SSD ka etinye n'ọnọdụ nke ochie HDD mbanye, ma wụnye HDD kama ọkwọ ụgbọala site na iji otu nkwụnye dị ka fig. 3. Nhọrọ a ka mma (anya).
4) Nhọrọ ikpeazụ: wụnye SSD kama ochie HDD, ma maka HDD ịzụta igbe pụrụ iche, iji jikọọ ya na ọdụ USB (lee fig. 4). N'ụzọ dị otú a, ị nwekwara ike iji SSD na HDD mbanye. Nanị ihe ọjọọ bụ waya ọzọ na igbe dị na tebụl (n'ihi na laptọọpụ na-ebukarị ya bụ nhọrọ ọjọọ).
Fig. 4. Igbe maka ijikọ HDD 2.5 SATA
Otu esi etinye SSD ụgbọala kama ochie HDD
M ga-atụle nhọrọ kachasị mma na mgbe mgbe.
1) Nke mbụ, gbanyụọ laptọọpụ ma kpochapụ wiwà ya niile (ike, ekweisi, ụmụ oke, draịva siri ike, wdg). Mgbe ahụ gbanwee ya - na mgbidi dị larịị nke laptọọpụ ahụ ga-abụ otu panel nke na-ekpuchi batrị ngwa ngwa na batrị fanyere (lee fig. 5). Wepụ batrị ahụ site na ịpị ụda dị iche iche *.
* Ịdakwasị ụdị ụdị laptọọpụ dị iche iche nwere ike ịdị iche iche.
Fig. 5. Kpoo batrị na mkpuchi nke na-ekpuchi laptọọpụ kọmputa. Dell Inspiron 15 3000 laptọọpụ larịị
2) Mgbe ekpochapụrụ batrị, gbanwee ihe kposara na-ekpuchi mkpuchi nke kpuchie diski ike (lee fig 6).
Fig. 6. Ewepụ batrị
3) A na-etinye otutu diski na diski ike na ngwa ngwa. Iji wepu ya, wepuzie ha wee wepu ihe siri ike site na njikọ SATA. Mgbe nke a gasịrị, tinye obere ụgbọala SSD n'ọnọdụ ya ma chebe ya na cogs. A na-eme nke a n'ụzọ dị nnọọ mfe (lee fig 7 - oghere mpịakọta (akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ) na njikọ SATA (akara uhie) ka egosiri).
Fig. 7. Dọọ ụgbọala na laptọọpụ
4) Mgbe ịchichi diski ahụ, dochie ihe mkpuchi ya na nkedo ma debe batrị ahụ. Jikọọ na laptọọpụ niile wired (kwụsịrị na mbụ) ma gbanye ya. Mgbe ị na-ebugharị, gaa na BIOS ozugbo (isiokwu gbasara igodo ịbanye:
N'ebe a, ọ dị mkpa ịṅa ntị na otu ihe: ma a hụrụ disk ahụ na BIOS. Na - emekarị, na laptọọpụ, BIOS na - egosi ụdị disk ahụ na ihuenyo mbụ (Isi) - lee fig. 8. Ọ bụrụ na amataghị diski, mgbe ahụ, ihe ndị na-esonụ nwere ike:
- ihe jikọrọ SATA na-adịghị mma (ikekwe ịtinyeghị disk ahụ n'ụzọ zuru ezu);
- disk SSD ezighi ezi (ọ bụrụ na o kwere omume, ọ ga-adị mma iji chọpụta ya na kọmputa ọzọ);
- BIOS ochie (otu esi emelite BIOS:
Fig. 8. Emeela ka SSD dị ọhụrụ (foto ahụ ghọtara diski, nke pụtara na ị nwere ike ịnọgide na-arụ ọrụ na ya).
Ọ bụrụ na kpebiri ụgbọala, chọpụta ụdị ọnọdụ ọ na-arụ ọrụ (kwesịrị ịrụ ọrụ na AHCI). Na BIOS, tabita a kachasị elu (lee ọgụgụ nke 9). Ọ bụrụ na ị nwere usoro ọzọ nke ọrụ na mpaghara, gbanwee ya na ACHI, wee debe ntọala BIOS.
Fig. 9. Usoro SSD nke ọrụ.
Mgbe emechara ntọala ahụ, ịnwere ike iwunye Windows ma bulie ya maka SSD. Site n'ụzọ, mgbe ị wụnye SSD, a na-atụ aro ka ị rụgharịa Windows. Eziokwu bụ na mgbe ị wụnye Windows - ọ na-akpaghasị ọrụ ahụ maka ịrụ ọrụ kachasị mma na diski SSD.
Site n'ụzọ, a na-ajụkarị m ajụjụ banyere ihe iji kwalite iji mee ka PC (kaadị vidiyo, processor, wdg) mee ngwa ngwa. Ma, ọ dịghị onye ọ bụla na-ekwu maka mgbanwe ọ bụla ị ga-aga na SSD iji mee ngwa ngwa. Ọ bụ ezie na ụfọdụ sistemụ, mgbanwe na SSD - ga - enyere aka ngwa ngwa ịrụ ọrụ mgbe ụfọdụ!
Na nke a enwere m ihe niile taa. Ọrụ ngwa ngwa nke Windows!